काठमाडौं । साताको दोस्रो दिन पनि नेपाली बजारमा सुनको भाउ ओरालो लागेको छ । आज सुनको मुल्य प्रतितोलामा २ सय रुपैयाँले घटेको हो । अघिल्लो दिन सुनको मुल्य प्रतितोला ९२ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मुल्य आज प्रतितोला ९२ हजार ४ सय कायम गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस्तै, तेजावी सुनको...
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्त सम्ममा मुलुकको पुँजीगत खर्च १४.४० प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भएको छ । यस अवधिमा मुलुकको चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ३६.०८ प्रतिशत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार भएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद...
सुर्खेत विमानस्थल निर्माण कार्य अन्योलमा
कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने/गाभिने विषयमा यसो भन्छ एनसीसी बैंक
फस्टाउँदै माछापालन व्यवसाय : ६ महिनामा ६ अर्ब बराबरको कारोबार
कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग गाभ्ने/गाभिने विषयमा यसो...
मकवानपुरमा लागूऔषध गाँजाखेती फँडानी गरी नष्ट
नेप्सेमा तीन कम्पनीको मूल्य समायोजन, कुनले कति तोक्यो ?
शेयर बजार : ५०.२ अंकले बढ्यो नेप्से, ९ अर्ब ३७ करोड बराबरको ...
किन्ने होइन त डिप्रोक्स लघुवित्तको शेयर ? २४ हजार १८० कित्ता...
लगानी गर्न तयार हुनुहोस् : केही दिनमै आउँदै छ फेरि आईपीओ, १ ...
३४ लाख ९६ हजार कित्ता आईपीओ आउँदै